We register domains.
We develop web sites.
We advertise online.
We promote tourism.
Google G Suite reseller : Myanmar + Thailand
Hotel Reservation System (mmRes)
Appointment Request for Web Site(s)
Appointment for Online-Payment Setup
Who we areမြန်မာ့အင်တာနက် ဆိုတာ
ChooseaDesign Templatetemplate ရွေးရန်
Appointment Request for Web Site(s)ဝဗ်ဆိုက်ဆောက်ရန် ချိန်းဆိုပါ
Appointment for Online-Payment Setuponline payment အတွက် ချိန်းဆိုပါ
RegisteraDomainဒိုမိန်း မှတ်ပုံတင်ရန်
Fileacomplaintတိုင်ကြားစရာ ရှိက တိုင်ကြားပါ
လက်ကမ်း ကြော်ငြာ စာရွက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသည့် လုပ်ငန်းများ
☎ 09 449 300 900 ကို ဖုန်းဆက် ဆွေးနွေးကြည့်ဘို့ ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါတယ်။
အမေးများတတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ချက်ချင်း ဖတ်ကြည့်နိုင်အောင် ဒီနေရာမှာ ကြိုတင် ဖြေထားပေးပါတယ်။ (ကလစ်လုပ်ပါ။)
Basic Facts: Intenet ဆိုတာဘာလဲ။ Internet နဲ ဘာတွေ လုပ်ကြလဲ။ Intetnet ကြော်ငြာဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ internet နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံကနေ နားလည်အောင် သိချင်ရင် ဒီမှာ download လုပ်ပါ။
E-Commerce: Website ဆိုတာဘာလဲ။ Web site နဲ ဘာတွေလုပ်လို့ ရသလဲ။ ဘာ့ကြောင့် Internet သုံးပြီး စီးပွားရေး လုပ်သင့်သလဲ။ Web development ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေ​ အကြောင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Win Myanmar Systems မြန်မာစာ ရေးတတ်သူတိုင်း computer သင်တန်း မတက်ဖူးတာတောင် computer မှာ မြန်မာလို ရိုက်နိုင်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာလို ရေးတတ်လား? ဒါဆို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ မြန်မာလို ရိုက်တတ်ပြီ။
Hotels ဟိုတယ် အခန်းတွေကို Onlineကနေ တိုက်ရိုက် booking လုပ်ပြီး ငွေလက်ခံ နိုင်တဲ့စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရုံးပိတ်ထားလည်း ၂၄ နာရီလုံးလုံး ရောင်းပေးနေမဲ့ စနစ်ကို ကြိုက်မှာ သေချာ ပါတယ်။
SMS: Brand manager များအတွက် Promotion Events တွေ၊ နှစ်သစ်ကူး အခါသမယ တွေ မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Brand ကို အထိရောက်ဆုံး နဲ အမြန်ဆန်ဆုံး SMS ဖြင့် Promotion လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူ သောင်းနဲ သိန်းနဲ ချီပြီး promotion လုပ်ချင်ပါသလား?
Advertising: ထိရောက်တဲ့နေရာမှ မကြောငြာမိလို့ သဲထဲရေသွန်များ ဖြစ်နေပါသလား? အရင်ခေတ်ကလို broadcast လုပ်တာအပြင်၊ narrowcast လုပ်လို့ ရတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ narrowcast?
Shopping:: Amazon, eBay စတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး online store တွေကနေ ဈေးဝယ်နိုင်အောင် ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဝယ်မရတဲ့ ဆေးစာအုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ စာအုပ်တွေ၊ ရှားပါး fasion ပစ္စည်းတွေ အဝယ်များကြပါတယ်။
MTI/YTI: မြန်မာပြည်ကိုမရောက်ခင်ဖတ်တဲ့	pre-arrvel media ကို ဖတ်တဲ့သူနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ရောက်ပြီးမှ ဖတ်တဲ့ post-arrivel media ကို ဖတ်တဲ့သူ ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက် ရောင်းချချင်တယ် ဆိုရင် MTI Web Portal နဲ့ YTI (booklet) မှာ ကြောငြာပါ။
☎ 09 449 300 900, 01 652250, 01 652323
မြန်မာနက်က ဘာတွေ ထုတ်သလဲ?
Website တစ်ခုမှာ စာမျက်နှာ ဘယ်လောက်ထည့်လို့ရမလဲ။
Domain မှာ password ရှိလား၊
ဒိုမိန်းကို နှစ်ဝက်စာဘဲ ယူချင်လို့ ရပါသလား။
3/1 Myanmar ICT Park, Yangon 11052, Myanmar.
Yangon: (+95-1) 652323, 652250
Bangkok: (+66) 080-776-2610
New York: (+1) 646-867-3932
California: (+1) 707-988-0300
မြန်မာနက် ကို ဘာကြောင့် အားကိုးကြသလဲ?
(၁)သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်စေမယ့် world-class tech firm ဖြစ်ပါတယ်။ (၂)အကောင်းဆုံး မြန်မာ့ National ICT Award ၂ ကြိမ်နဲ့ အမျိုးမျိုး ရခဲ့ဖူးတဲ့ ထူးချွန်တဲ့ developer team ဖြစ်ပါတယ်။ (၃)CNN, BBC, Yahoo တို့ကတောင် Myanmars.Net ကို refer လုပ်၊ recommend လုပ်ကြတဲ့အပြင်၊ ကမ္ဘာကျော် New York Times သတင်းစာ မှာတောင် ပါခဲ့ဖူးပါတယ်။ (၄)လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ web designer/ developer အနေနဲ့တင် မဟုတ်ပဲ လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းရဲ့ e-business partner အဖြစ် consultant အဖြစ် ရပ်တည်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၅)မြန်မာနိုင်ငံမှာ internet မရခင် ကတည်းက နိုင်ငံခြားကနေ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် web site တွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ (၆)တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ web site တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုသမိုင်းက သက်သေထင်ရှား ရှိနေပါတယ်။ (See brochures)
> မြန်မာနက် ဆိုတာ
> ဘာတွေ ထုတ်သလဲ